Wafdi ka socda QM iyo Midowga Afrika oo la kulmay madaxda DKMG. | raascasayrmedia.com
← Ciidamada ilaalada Xuduuda Sacuudiga oo toogtay dhalinyaro Somali ah
FAALO:Puntland ma iyadaan rabin Sool iyo Cayn,mise Reer Sool iyo Cayn baan Doonayn Puntland!!!!!! →
March 10, 2011 · 10:39 pm
Wafdi ka socda QM iyo Midowga Afrika oo la kulmay madaxda DKMG.
Wafdi ka socda Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika islamarkaana uu hogaaminayay Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Augustine Mahiga.
Wafdigaani oo ay horkacayeen Ergayga Gaarka ah ee qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Augustine Mahiga iyo ku xigeenka ergeyga midowga afrika u qaabilsan arimaha Soomaaliya Wafula Wamuyinyi ayaa waxaa ay la kulmeen madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyagoo ugu hambaliyeeyay guusha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ka gaareen dagaalada Muqdisho.
Masuuliyiintaani ayaa sidoo kale kawada hadlay sidii Soomaaliya looga saari lahaa marxaladda Kumeelgaarka ah islamarkaana loogu dhisi lahaa dowladda waarta oo Soomaaliya ku soo celisa nabadii iyo kala dambeyntii.
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya ayaa dhankiisa ugu mahad celiyay masuuliyiintaani ka kala socda Qaramada Midoobay iyo midowga Afrika booqashada maanta ay ku yimaadeen Magaalada Muqdisho Sida uu Shabelle u sheegay Wasiiro dowlada Madaxtooyada Khaliif C/qaadir Macalin Nuur.
Safarka Masuuliyiintaani ayaa ku soo aadaya xili Magaalada Muqdisho ay maalmihii u dambeeyay ka dhacayeen dagaalo culus oo galaaftay nolosha dad rayid ah islamarkaana u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo is garabsanaya iyo xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab.